समाचार Archives - Page2of 20 -
४ महिना अगाडिetoday
काठमाडौ । संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बसेका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निकृष्ट ब्यवहार गरेका छन् । स्वास्थ्यलाभ लिइरहेका थापालाई केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकताएले श्रद्धाञ्जली ब्यक्त गरेका थिए । आइसोलेनमा बसेको बेला ‘श्रद्धाञ्जलि दिने’ त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कडा कारबाही गर्न थापाले माग गरेका छन्। आइतवार उनले आफ्ना बारेमा लेखिएका नकारात्मक प्रतिकृयाको स्कृन सट सार्वजनिक गर्दै कडा कारवाहीको माग गरेका छन् । उनी दोस्रो पटक संक्रमित भएका हुन् । उनी १० दिन अघि पनि दोस्रो पटक संक्रमित भएपछि होम आइसोलेसनमा बसेका थिए। सोमबार गराइएको अर्को परीक्षणमा भने उनको रिपोर्ट नेगेटिभ…
काठमाडौं– ‘यता आउनुस् न मलाई बोल्न मन छ। म पनि केही सन्देश दिन्छु,’ नेपाल प्रहरी अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत दूर्गा आचार्यले हामीलाई देख्ने बित्तिकै उत्साहित हुँदै बोलाइन्। ‘अक्सिजन सपोर्टमा हुनुहुन्छ, बोल्दा गाह्रो हुन्छ होला। हामी तपाईंको कुरुवासँग कुरा गर्छौं नि, हुन्छ?’ आईसीयूमा उपचाररत बिरामीलाई बोल्दा स्वास्थ्य अवस्था विग्रिन सक्ने भएकाले हामीले सम्झायौं। ‘यहाँ आएपछि त म धेरै ठीक भइसके, बोल्न सक्छु।’ आचार्यले हातै जोडेर आफ्नो कुरा सुनिदिन आग्रह गरिन्। आईसीयूमा ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी र आचार्यको आफन्तले पनि कुराकानी गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै कुराकानी गर्न सहमति जनाएपछि हामीले उनीसँग कुराकानी…
४ महिना अगाडि ४ महिना अगाडिetoday
काठमाडौं । भारतीय अभिनेता संजीव कुमार हिन्दी सिनेमाको उत्कृष्ट अभिनेताहरुमा गनिन्छन। संजीव कुमारको वास्तविक नाम हरिभाई जरीवाला थियो। फिल्महरूमा आएनका लागि उनले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेका थिए । संजीव कुमारले पनि गुजराती नाटक र नाटकमा धेरै समय बिताए। फिल्महरूमा उनको करियर फिल्म ‘हम हिन्दुस्तानी’ बाट शुरू भयो, त्यसपछि उनले एक सय एक फिल्म दिए। ६ नोभेम्बर, १९८५ मा, संजीव कुमारले संसारबाट बिदाइ भए। संजीव कुमार पनि ती कलाकारहरू मध्ये एक थिए जसले सधैं करियरमा प्रयोग गरि रहन्थे। त्यतिखेर, अन्य कलाकारहरू आफुभन्दा बढी उमेरको भुमिका खेल्न नचाहँदा संजीव कुमार सहजै मान्थे।…
चन्डीगढमा विपन्न समुदायका एक व्यक्तिले आफ्नी ११ वर्षीय छोरीको श’व आफ्नो काँधमा उठाएर जालन्धर शहरस्थित कब्रगाह लगेका छन् । उनी बालिकाको को’भिड १९ का कारण मृ’त्यु भएको थियो । दिलिप नामका यी व्यक्तिका अनुसार अघिल्लो आइतबार उनकी छोरीको मृ’त्यु भएको थियो । यो भिडियो गत सोमबारको हो, जतिबेला उनी चि’हान खोज्दै हिँडेका थिए । उनले भने, ‘ म एक गरिब व्यक्ति हुँ । कोही पनि छोरीको दा’हसंस्कारका लागि मलाई सहयोग गर्न अघि सरेनन् । त्यसैले मैले काँधमै उसको श’व बोकेर लैजाने फैसला लिएँ । उनले भने, ‘मेरी छोरीको अमृतसरमा उपचार…
घर बनाउने मिस्त्री काम गर्ने खोटांग कि एलिना उदास अहिले नेपालको एक कार्यक्रम ” द भ्वाईस् अफ नेपाल ” सिजन ३ मा छानिएकी छिन। राम्रो स्वर भएको कारणले एलिना ले अहिले सम्म धेरै गीतहरु बजार मा ल्याउने तयारी मा छिन।एलिना मा यस्तो स्वर छ कि उनको स्वरमा जो कोहि पनि फिदा हुन्छन। एलिना को घरको स्थिति कम्जोर भएको कारण ले उनले यो कलाकारिता क्षेत्र लाई अगाडी बढाउन सकेकी छैनन्। घरमा बुबा आमाको पनि जागिरहरु केहि नभएको र आमा बुढी भएको हुनाले सबै काम आफु ले गर्नु परेको हुनाले उनि मिस्त्री…
कोभिड भ्याक्सिन लगाउनुु अनिवार्य : डा नन्दु पाठक
जेष्ठ १ गते शनिबार २०७८ तिलोत्तमा सिटी। लुुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन तथा कोभिड फोकल पर्सन डा.नन्दुु पाठकले फन्टलाइनरलाई भ्याक्सिन लगाउनुु अनिवार्य रहेको बताए ।नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीले शनिबार आयोजनामा कोरोना महामारीमा सञ्चारमाध्याम र पत्रकारको भूमिका विषयक भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै डा पाठकले डबल मास्क लगाउने, सर्जिकल मास्क लगाउने, भौतिक दुुरी कायम गर्ने, साबुुनपानीले पटक पटक हात धुुने कार्य अनिवार्य रहेको बताए । उनले भीडभाड, सोर्केस, टेबल, ढोकाका हेन्डिललाई सेनिटाइज गनुुपर्ने, एयर फलो भएको कोठामा बसेर काम गर्न सञ्चारकर्मीलाई सुुझाव दिए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेल कोरोनाबाट…
एमाले २०७५ मा फर्केर केहि हुदैन माओबादी २०६४मा फर्कन्छ र सबैभन्दा ठुलो दल बन्छ : जनार्दन शर्मा
वैशाख ३१, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले पछिल्लो परिस्थितिप्रति हतास नहुन नेता तथा कार्यकर्तालाई आव्हान गरेका छन् । उनले पछिल्लो परिस्थितिले माओवादीलाई थप सुद्धढ बनाउन मौका दिएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार पार्टीभित्र विगतलाई हेरेर पुनः समिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्, ‘नयाँ परिस्थिति र घटनाहरूले नयाँ चुनौती र संभावनाहरु एकसाथ लिएर आएको हुन्छ । यसबाट हतास हुनेहरू समाप्त हुँदै जाने र सामना गर्न तयार हुनेहरू सुदृढ हुँदै जाने तथ्यलाई स्वीकार गरी विगतका उपलब्धि र कमीहरु समेतको गम्भीर समीक्षा गरेर विचार,…
काठमाडौं । नेपाली गित संगीतको माहोलमा तथा चलचित्र क्षेत्रमा बिगत लामो समय बिताएकी रश्मि भट्टको बिषयमा यो बेला निकै गलत समाचार भाइरल भएपछि भाबुक हुदै मिडियामा आएकी छिन। रश्मि भट्टले निकै नै कारुणिक अभिनय गर्दै नेपालि गीतसंगीतमा तथा चलचित्र क्षेत्रमा निकै ठुलो योगदान पुर्याएकी छन्।उनि प्रतिको गलत खबर मिडियामा आएपछि आफुलाई निकै समस्या भएको खुलाएकी छिन। आफु रहेको सस्थाले समेत साथ् न दिएको र कलाकारहरु समेत यो बेला आफुलाई पर्दा न बोलेको भन्दै उनि आक्रोशित भएकी छिन।उनि प्रति आएको यो खबरले यो बेला धेरै झुक्किएका छन।कुन कुन मिडियाले एस्तो गर्यो…
काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनी सिनोभ्याक बायोटेक लिमिटेडले विकास गरेको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप अहिले इन्डोनेशियाका स्वास्थ्यकर्मीहरूले लगाइरहेका छन् । उनीहरूमा केही विवादसमेत देखिए पनि चिनियाँ खोपबारे क्लिनिकल परीक्षणको तुलनामा निकै राम्रो नतिजा देखिएको छ । यसले चिनियाँ खोपको पर्खाइमा रहेका मुलुकका नागरिक उत्साहित बनेका छन् । चिनियाँ खोप क्लिनिकल परीक्षणको क्रममा पश्चिमा मुलुकको कोरोना खोपभन्दा निकै कम प्रभावकारी देखिएको थियो । इन्डोनेशियाको राजधानी शहर जकार्तामा गत जनवरीदेखि मार्चसम्मको अवधिमा एक लाख २८ हजारभन्दा धेरै चिनियाँ खोप लगाएका मानिसमा नियमित अध्ययन गरिएको थियो । सो अध्ययनका क्रममा सिनोभ्याक खोपको दोस्रो डोज…
आउने दिन नेपालको लागी अझै खतरा।यस्तो आयो डरलाग्दो सुचना।भुलेर पनि यस्तो नगर्नुहोला आउने दिन नेपालको लागी अझै खतरा।यस्तो आयो डरलाग्दो सुचना।भुलेर पनि यस्तो नगर्नुहोला काठमाडौँ– जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डेले आगामी ३ हप्ता नेपालको लागि अत्यन्तै कठिन अवस्था हुने बताएका छन् ।नेपालमा कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिनुका साथै अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको चर्को अभाव देखिएको हुँदा यो अवस्था अझै ३ हप्ता रहने उनले बताएका हुन् । यो ३ हप्ता दुःख सहेर भएपनि घरभित्र नै बस्न उनको सुझाव छ । डा. पाण्डेले ३ हप्ता पछि संक्रमणको दर विस्तारै घट्दै जाने पनि…